Nezvedu | ROYI ART gallery
ROYI ART gallery ndiyo imwechete-mira shopu yevashandi vepamhizha art yekutsvaga iyo yakakwana art yekupenda pamitengo inodhura.
Wedu mukuru Alizee anotungamira ROYI ART gallery kunze kwenyika yekutengesa tsika, iye ari Art Anoda futi. Mumakore gumi apfuura, Alizee akashanda padhuze nemukati megadziri, mugadziri, galleri, muunganidzi wemitambo nezvimwe… kana tikawedzera kushanda navo, ndipo patinoona sekunge tinogona kuvaitira zvirinani. Chii chakanyanya, vazhinji vevatambi vedu vane tarenda mune zvimwe zvidzidzo kana matekiniki, isu tinogadzira & kudzokorodza, kupenda rimwe nerimwe runyorwa rweunyanzvi nokungwarira uye zvishoma nezvishoma. Isu tinowedzera bhizinesi redu neRepute.
Imwe neimwe pendi muRoyi Art inoiswa-ruoko pendi pane nyanzvi dhiraivhu.
NeRoyi Art iwe uri kutenga zvakananga kubva ku studio, ivo vanogadzira, vagadziri uye maartist.
Isu takaunganidza zviuru zvemafuta epasi rose akanakisa ependi, kubva kuEuropean Masterpieces kusvika kuExpressional Abstract Artworks nhasi.
Oiri chaiyo, Brashes Chairo, Mazvita Artists, Real Art.
Vamwe vatengi vakabvunza kuti zvakafanana pakati pepakutanga chidimbu chinoratidza pamhepo uye chakadzokororwa chidimbu.
Ndinoda kutaura kuti hatingavimbise kuti iwe uchawana IDENTICAL imwe sezvaunoona kubva webhusaiti yedu nekuti chete zvidhori zvidhinda zvinogona kuita zvakangofanana neyekutanga.
Mapendi edu ese akaiswa ruoko -pendi saka yega yebrashi yekurova inogona kunge yakasiyana. Isu tinovimbisa iwe uchachiwana mune yakafanana kunaka uye runako.
MAFUTA PENDA / ACRYLIC PENDA / CANVAS
Isu tinozvirumbidza pamusoro pekupa chero kunze kwemhando yepamusoro yeumhizha.
Ipendi yega yega yakagadzirwa nevatambi vedu yakapendwa neruoko vachishandisa izvo zvakanakisa zviripo. Izvi zvinosimbisa hupenyu hwakareba uye hunochengetedza hunhu hwekupenda kwako.
Vagadziri vedu vanosarudza kushandisa Blockx Artist Mafuta Colors. Zvizvarwa zvishanu zvevemakemikari mumhuri yeBlockx vanga vachishanda kubvira 1865 kuti vapedze iyo Blockx Mafuta Colors.
Acrylic pendi ndeye kukurumidza-kuomesa pendi ine pigment yokumiswa mu acrylice polymer emulsion. Inonyungudirwa nemvura, asi iva inodzivirira nemvura kana yakaoma. Zvichienderana nekuti wakawanda pendi sei unoderedzwa nemvura, kana kushandurwa ne acrylic gels, midhiya, kana pastes, iyo apera acrylic yakavezwa inogona kufanana necologor kana pendi yeoiri, kana kuve neayo akasiyana maitiro asina kuwanikwa nemamwe midhiya.
KUTENGA / ROLL MUTUBE / KUTAMBIRA
Unhu hwekutakura kwako hunokosha pamberi pedu uye zvinhu zvatinoshandisa kurongedza zvigadzirwa zvedu zvinoratidza kuzvipira kwedu.
Iva nechokwadi chekuti, kana yako oda iine musanganiswa wezvigadzirwa, ivo vanozotumira zvakasiyana mune yakakodzera kurongedza, uye iwe hausi kuzobhadharwa yekuwedzera kutumira.
Kupenda pasina furemu kuchafukidzwa nemhando dzakasiyana-siyana dzekuchengetedza varnish, yakafukidzwa neinodzivirira pepa uye firimu, uye zvobva zvanyatsotenderedzwa zvinyoronyoro kupinda dura rinosimba.
Paira yakarongedzwa yakarongedzwa mukatoni ine bubble pad uye mana emakona ichave yakachengetedzwa zvakanaka kana pane njodzi yekufambisa.
Chikwata chakazvitsaurira kuzadzisa zvaunoda
Mahara ekukurukurirana kwehunyanzvi uye makomendi akaumbwa.
Kukurumidza kutendeuka-kutenderera kuzadzikiswa, kunotumirwa pasi rese.
100% kugutsikana vimbiso.
Isu tinosvitsana neyakaganhurirwa yakakwirira yehuwandu hwevatengi.
Isu tinotenda kuti chikumbiro chese kubva kumutengi mukana wekuvaka pane hwakakosha hukama.
Gamuchira mazano matsva uye mhinduro, uye kusimudzira masevhisi edu kuti apfuure zvinodiwa nevatengi vedu.
Abstract Mafuta Paira , Kupa Mafuta PaTanvas , Mafuta Kupenda , Handmade Mafuta Paint , Contemporary Mafuta Paira , pakamubhedha Bars , Zvese Zvigadzirwa.